မြန်မာနိူင်ငံShowroomမှတရားဝင်တင်းသွင်းသောအလုံးကိုမှshowroom warranty ကျန်လိုချင်သူများအတွက်။
ပြန်ရောင်းလိုသော celeron,pentium,i3,i5,i7 စသည့်laptop များကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်သည်။
Hp notebook 14 amO55TX
Warranty5လကျန်unique ဘောက်ချာနှင့်warranty card ပါမည်။
Acer Aspire E5 475G 33SJ
Warranty5လကျန် warranty card ပါမယ်။
Nvidia geforce 920 mx 2gb
warranty2လကျန် warranty card နှင့် Unique ဘောက်ချာပါမည်။
Warranty7လကျန် warranty card နှင့်
Warranty 1 နှစ်နဲ့2 လကျန်Unique ဘောက်ချာပါမည်။
Brand New Packing ကို Showroom ထက်ဈေးသက်သာမယ်။
Showroom warranty အပြည့်ရမည်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပါမယ်။
(1) Model - Acer Aspire E-15 (E5-576G-39JE)
Processor - Core i3-7100U (2.4GHz)
LCD : 15.6 HD Acer ComfyView LCD
Graphic : NVIDIA @ GeForce 940MX (2GB)
-----------:Intel hd graphic 620 (2 GB)
Memory : -4GB DDR3 Low Voltage Memory
Storage - 1000GB HDD
All accessories. (Box & လက်ဆောင်ပစ္စည်း ၈မျိူး)
Price - 580000
(2) Model - Acer Aspire E-14 (E5-475G-397M)
LCD : 14. HD (1366x768) CineCrystal LCD
memory : -4GB DDR4 Memory
ပြန်ရောင်းလိုသော i3,i5,i7 စသည့်laptop များကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်သည်။